Fanontaniana napetraka matetika - jiro MediaLight Bias
Moa ve mirehitra sy maty ny jiro amin'ny fahitalavitra?
Misafotofoto olona maro izany. Miankina amin'ny fahitalavitra ny valiny ary tsy misy ifandraisany amin'ny jiro mihitsy. Raha maty ny seranan-tsambo USB dia ho very herinaratra ny jiro.
Ho an'ny fahitalavitra maro dia hitranga izany. Na izany aza, raha manana ianao a Sony Bravia TV, mila mampiasa vahaolana ianao toa ny Remote MediaLight (ampidirina amin'ny MediaLight Mk2 Flex) satria ny seranan-tsambo USB an'ny Bravia mitondra tena tsy mety. Raha manana TV Samsung misy boaty One Connect misaraka ianao, tsy maty koa ny seranan-tsambo USB, ary misy fahitalavitra vaovao mivoaka tsindraindray izay mihetsika tsy ampoizina. Ny fahitalavitra sasany toa ny Samsung sy LG indraindray dia maharitra minitra vitsivitsy vao maty ny jiro aorian'ny famonoana ny fahitalavitra. Izany dia vokatry ny antony maro, ao anatin'izany ny fizotrany izay ampiasaina hanitarana ny androm-piainan'ny tontonana.
Na izany aza, raha vonoin'ny fahitalavitrao ny herinao amin'ny USB rehefa maty ny fahitalavitra dia avelao ny MediaLight anao dia vonoy rehefa very herinaratra.
Ary, ENY! Dimmer tsirairay izay amidinay dia manana fahatsiarovana maharitra. Midika izany fa rehefa tafaverina amin'ny jiro ny herinaratra dia hamerina ny haavo namirapiratra napetraka teo aloha ny jiro.
Azonao atao ny mampianatra ny baiko fanaraha-maso ny foiben-tany lavitra na smart hub miaraka amin'ny IR blaster mba hamerenany ny fizotrany na hividianana iray amin'ireo dimmers wifi tsara ho anao hahafahanao miteny amin'i Alexa na Google Home hamadika ny jiro (azonao ampiasaina HomeKit fa ity mitaky ny fampiasana HomeBridge).
Izany dia mitarika antsika amin'ny fanontaniantsika malaza manaraka:
Miova loko ve ny hazavana MediaLight?
Tsia. Ny hany ifantohanay dia ny famokarana marina, horonantsary fotsy fotsy kalitao momba ny fanovozan-kevitra jiro, jiro birao, jiro ary takamoa.
Tsy manamboatra vokatra miova loko izahay satria ny tanjonay dia ny hanatsara ny loko amin'ny fahitalavitrao, tsy amin'ny rindrinao. amin 'ut tsy midika izany fa tsy afaka manova ny habakao ny jironay. Ny jiro mavo fotsy fotsy D65 namboarina mahery vaika dia hahafaly anao satria manome ny tontolon'ny fijerena tonga lafatra ny fahitalavitrao.
Ny tolo-kevitray? Ampitomboy ny tontolon'ny fijerena. Aza manampy fanelingelenana izay miteraka fiovan'ny hafanana, ny lokon'ny loko ary ny mari-pana amin'ny loko.
Raha nandany fotoana sy vola tamin'ny fampanjariana ny fampisehoana ianao dia fantatrao fa miova ny jiro fitongilanana loko na mampiasa teboka fotsy diso "tsy mahay mandanjalanja"ny fampisehoana anao araka ny fijerin'ny mpandinika.
Ny jironay dia tsy hahatonga ny rindrinao hiova loko, fa tsy hisy fiatraikany ratsy amin'ny loko eo amin'ny efijery toy ny jiro miova loko ihany koa.
Raha te hanatsara ny fisehoanao amin'ny jiro bias ianao izay manatsara ny kalitaon'ny loko sy ny mifanohitra amin'ny efijeryo, sady mampihena ny havizanan'ny maso ary manakana ny fitazonana sary dia tonga amin'ny toerana mety ianao. MediaLight dia ekena amin'ny fahamendrehana, ny fahamendrehana ary ny vidiny ara-drariny ataon'ny matihanina aorian'ny famokarana sy ny mpanjifa.
Ny vaovao tsara dia ny kalitaon'ny fananganana avo lenta ataontsika mandritra ny androm-piainana lava kokoa. Raha toa ka maharitra 1 taona eo ho eo ny LED commodity, dia azo antoka mandritra ny 5 taona ny làlana MediaLight rehetra, maneho ny cliché taloha, "mividy iray, mitomania indray mandeha."
Amidinao amin'ny Amazon ve ny jironao?
Na dia mety mivarotra amin'ny tranokala Amazon iraisam-pirenena aza ny mpivarotra iraisam-pirenena sasany, tsy mivarotra MediaLight na LX1 amin'ny Amazon.com izahay. Aleonay mivarotra mivantana amin'ny mpanjifantsika ary mifehy ny lisitra sy ny lisitray. Mazava ho azy, mbola afaka mandoa amin'ny Amazon Pay amin'ny tranokalanay ianao raha tianao, fa tsy mivarotra ny vokatray amin'ny Amazon izahay.
Hafiriana no haharetan'ny fahatongavako?
Haingana be! 99% amin'ny fotoana, tonga any 1-2 andro ny baiko USA!
Araka ny fantatsika rehetra, ny USPS dia korontana be izao. Nanapa-kevitra izahay fa tsy afaka manome ny haavon'ny serivisy tokony hatolotray raha mila miantehitra amin'ny fotoana fandefasana paositra mahatsiravina izahay.
Ankehitriny, mandefa ny baiko rehetra izahay amin'ny alàlan'ny FedEx 2-Day any Etazonia sy ny FedEx Priority International ho an'ny sisa eran'izao tontolo izao.
Miorina ao New Jersey izahay ary mandefa ny baiko avy any New Jersey. Ny kaody napetraka alohan'ny 3 hariva dia alefa ny androtr'iny ihany.
Ny baiko ho an'ny ankamaroan'ny Vondrona Eoropeana Eoropeana, Kanada sy Mexico, Korea atsimo, Singapore, Taiwan, Hong Kong dia matetika tonga ao anatin'ny 2-3 andro. Mandefa an'izao tontolo izao izahay mandritra ny 6 andro.
Mandefa baiko iraisam-pirenena foana izahay miaraka amin'ny VAT sy ny haba amin'ny haba izay tafiditra ao amin'ny vidin'ny fandefasana anay. Tsy mila mitrosa zavatra hafa ianao amin'ny fandefasana azy! Hodinihinay ny hamerenanao ny varotrao raha tara ny fiaviany, raha mbola mendrika ny famerenam-bola azo antoka amin'ny FedEx izahay. Raha very io dia mandefa mpisolo toerana avy hatrany izahay!
Tena hahita fahasamihafana ve aho raha oharina amin'ny jiro fandefasana loko ambany?
Ie. Tsy handalo ny olana amin'ny fanaovana azy ireo izahay raha tsy nanatsara ny kalitaon'ny sary izy ireo. Jereo ny lokon'ny hoditra eo ambanin'ny hazavana ambany kalitao ary avy eo eo ambanin'ny jiro na bolam-by CRI 98 MediaLight. Ireo loharano maivana izay tsy manana spektrum mena tena ilaina dia tsy tsara tarehy rehefa hita taratra amin'ny lokon'ny hoditra. Ny ampahany iray tena lehibe amin'ny fampanjariana kalitao dia ny fiantohana fa ny natioran'ny hoditra dia toa voajanahary.
Miaraka amin'ny fampisehoana azo ampitaina (izany hoe fahitalavitra), ny taratra dia tsy hita taratra amin'ny fampisehoana, fa ny fananan'ny hazavana manodidina kosa dia mbola manana mitifitra ny mifanohitra vokany amin'ny zavatra hitantsika amin'ny fampisehoana.
Mitovy amin'ny antony mahatonga ny jiro mafana hanao ny fahitalavitra ho manga loatra, na jiro misy magenta be loatra mahatonga ny sary ho maitso. Fa tsy fiasan'ny fandrindrana chromaticity, ny adaptation spectral dia vokatry ny fanaparitahana herinaratra spectral an'ny loharano maivana.
Rehefa mifanaraka amin'ny jiro misy tsy fahamarinana isika dia toa tsy marina ihany koa ny fampisehoana fa amin'ny lafiny mifanohitra.
Misafotofoto? Eritrereto ny fomba ahitan'ny telefaona iPhones sy Android ankehitriny ny toe-javatra mifanaraka amin'ny teboka fotsy ao amin'ny efitrano. Raha velominao na vonoina ny TrueTone na "fampiratiana adaptive" dia miova tanteraka ny teboka fotsy amin'ny fampisehoana ary asehony anao fa nanova ny fahitanao ny efijery ny hazavana manodidina. Raha tsy ampiasainao ireo toe-javatra ireo, dia mety ho mafana sy milay loatra ny fampisehoana, miankina amin'ny jiro.
Satria misy loko tsy ampy amin'ny jiro tsy miloko fandokoana (ankapobeny ho ambany CRI), ny tsy fahampian'ny spectral dia mety hisy fiantraikany amin'ny fomba fahitantsika ireo loko mitovy amin'ny fampisehoana ireo. Ny ankamaroan'ny cone-sensing color ao amin'ny retina dia natokana hijerena mena noho ireo primaries hafa, ary ny fampisehoana dia misy subpixels mena, maitso ary manga.
Ankoatr'izay, ny loharano maivana izay tsy misy mena dia manamboatra azy amin'ny alàlan'ny fampiasana jiro mavo hahatratra ny teboka fotsy kendreny (mavo + manga = ambany fotsy CRI). Mahatsapa fatratra amin'ny hazavana mavo / maintso izahay, izay manazava ny ampahany amin'ny antony mahatonga ireo jiro tsy miloko loko ireo matetika toa mavo sy maitso fa tsy toy ny tara-masoandro.
Tsy hitako ny jiro mena amin'ny fanaraha-maso lavitra, nalefanao bateria maty ve aho?
Tsia, tsy afaka mahita ny LED infrared amin'ny remote control ianao satria izy io infrared. Ny jiro fanaraha-maso dia tsy hanazava miharihary. Ny MediaLight dia tsy mampiasa remote radio matetika. Tsy mazava ny jiro rehefa tsindrio ny bokotra iray.
Ny ampahany amin'ny fisafotofotoana dia ny fisian'ny RF ireo maotera niavianay ary hita mazava. Ny remote RF farany dia nalefa 3 taona lasa izay.
Raha tsy mandeha araka ny nantenaina ny fanaraha-maso lavitra anao dia 99% no antoka an'izany iray amin'ireo fanamboarana ireo hamaha ny olanao.
Inona no sarona ao anatin'ny fiantohana 5 taona?
Sarona ny zava-drehetra.
"Ny alika no nitsako ny fanaraha-maso nataoko"
"Notapahiko tsy nahy ny faran'ny herinaratra."
"Tondra-drano ny lakaly ary nentiko niaraka tamin'io ny teatra tranoko."
Hanohana antsika amin'izany ny mpanjifanay; tsy nandà fitakiana fiantohana mihitsy izahay. Mampiasa singa tsara kalitao izahay ary namboarina haharitra ny jiro fanaovan-tsika.
Na izany aza, raha misy tsy mety dia heverinay fa fotoana iray hampatsiahivana anao ny antony nifidiananao anay. Raha tsy maintsy mifaninana amin'ny vidiny isika, amin'ny fampiasana ireo singa avo lenta, voamarina ISF ampiasainay, dia maty isika. Na izany aza, tsapanay fa misy lavaka eo amin'ny tsena raha ny amin'ny marina, ny kalitao ary ny serivisy.
Aleonay mifantoka amin'ny fanaovana jiro lehibe toy izay manandrana mamantatra raha voasarona ny fitakiana. (Tsy midika izany fa tsy hangataka izahay hanaporofoana fa tompon'ny jiro ianao alohan'ny handefasana ireo solo-solo-soloina).
Ny fampitandremana tokana dia raha nanafatra avy tany ivelan'ny USA ianao, any amin'ny faritra misy mpizara eto an-toerana, dia mety angatahina ianao handoa zavatra haingana kokoa noho ny mailaka amerikana kilasy voalohany voalohany ho an'ny solo-solo.
(Ny jiro birao MediaLight sy ny jiro dia manana antoka 3 taona / 30,000 ora).
Azoko atao ve ny mandoa kely kokoa raha tsy tiako ny fiantohana 5 taona ho an'ny MediaLight Mk2 Flex na Eclipse?
Mametraka izany fanontaniana izany ny olona indraindray. Tsy mandoa vola fanampiny izahay ho an'ny fiantohana. Manome fiantohana 5 taona izahay satria ny vokatray dia novolavolaina haharitra 5 taona farafahakeliny. Raha tsy nampidirinay ny fiantohana dia mbola hampandoavinay vola mitovy ihany amin'ny vokatra. Antenaina haharitra ela kokoa noho ny fomba famolavolana azy, noho izany dia manome toky izahay fa tsy mila mandoa cent intsony mandritra ny dimy taona.
Tadidin'ny jiro ve ny haavon'ny famirapiratana teo aloha rehefa maty izy ireo?
Eny, ataon'izy ireo.
Fa maninona ny MediaLight no lafo mihoatra ny sasany amin'ireo jiro mora vidy ao Amazon sy Alibaba?
Raha mitady jiro varotra tsy misy vinavina ianao dia aza mitady lavitra intsony. MediaLight dia natao hanomezana ny mpampiasa hazavana manodidina sy mazava tsara amin'ny fotoana rehetra tsy misy diso - azo antoka! Tsy vitan'ny hoe mora ny vidinay fa ny fiantohana anay kosa dia hanarona ny MediaLI-androo aorian'ny fiafaran'ireo jiro mora vidy ao amin'ny fanariam-pako. Tsy mila mividy kojakoja fanoloana na jiro bias hafa ianao (mandritra ny 5 taona).
Mampiasa chipset SMD ColorGrade manokana izahay mba hahitana tsara ny famaritana sy ny fandokoana ny loko. Ireo jiro hafa ireo dia tsia. Tsy midika akory izany fa jiro ratsy amin'ny fitobiana na fanazavàna ny tohatra any ambanin'ny tany izy ireo, midika fotsiny izany fa tsy mety amin'ny jiro fitongilanana ao ambadiky ny fampirantiana noforanao.
Ny index minimum rendering color (CRI) ho an'ny MediaLight amin'ny taona 2020 dia ≥ 98 Ra ary ny TLCI dia 99. Tamin'ny taona voalohany (2015), nihoatra ny 91 Ra ny jiro. Ny MediaLight Pro dia manana CRI matanjaka indrindra amin'ny 99 Ra sy TLCI 100.
Tena marina ve izany? Ny sasany dia milaza fa mahatonga azy ireo tsy hanavaka ny masoandro. Tsy milaza an'izany anefa izahay satria miaraka amin'ny spectrophotometra dia afaka manavaka izay loharano maivana namboarin'olombelona tamin'ny masoandro isika. Tena tsara anefa izy io. Miavaka.
Ankoatry ny kalitaon'ny chip misy anay dia ampidirinay izay rehetra ilainao amin'ny fananganana jiro mirindra tsara. Izahay dia mampiditra dimmer, fanaraha-maso lavitra (amin'ny maodely fahitalavitra) ary koa sarimihetsika fitantanana tariby sy tady velcro hanadio ny fametrahana anao.
Tsy matetika isika no ho safidy mora indrindra, fa ny fanamarihantsika kosa maotina kokoa noho ireo rafitra mivarotra vita amin'ny chips ambany, PCB mora vidy ary tsy misy fiasa tena takiana toy ny dimmers. Hampiasa ny MediaLight anao tsara ianao amin'ny ho avy, ela be taorian'ny jiro ambany kalitao any amin'ny fanariam-pako. Anontanio ny manodidina. Ho hitanao. Izahay dia mandrakotra ny zava-drehetra ao anatin'ny fiantohana anay satria MediaLight dia namboarina toy ny tanky.
Tena hahita fahasamihafana ve aho raha oharina amin'ny jiro mora vidy kokoa?
Tianao ve ny mijery fampisehoana voarindra? Raha izany dia ho hitanao tanteraka ny fahasamihafana rehefa manazava ireo jiro bias MediaLight ianao. Raha tsy azo inoana izany, ny fametrahana jiro tsy marina ao ambadiky ny fampisehoana voamarina dia "tsy manisy kalibritra" ny seho satria misy fiatraikany amin'ny zavatra hitantsika io. Raha mametraka jiro CRI manga manga sy ambany ianao ao ambadiky ny fahitalavitra, dia ho mafana kokoa ny masonao.
Ahoana ny hevitrao momba ny jiro manova loko amin'ny fahitalavitra?
Te hanao ny rindrina ho maro loko ve ianao, sa manandrana manatsara ny sary? Tsy mijery ny rindrina ny mpanjifanay. Aleon'izy ireo mijery ny atiny amin'ny efijery.
Saingy tsy eto izahay hiady hevitra. Vidio izay tianao hovidiana. Ny fahazavana ra dia zavatra ezahin'ny ankamaroan'ny olona esorina fa tsy ampiana. Amin'ny tranga ratsy indrindra dia toa tsy maotina ilay sary ary tsy mitovy amin'ny TV ny loko. Mbola ratsy kokoa noho izany, matetika izy no taraiky. Raha karazana OCD toa anay ianao (ny karazanay mpanjifa # 1 rahateo) dia mety hitondra anao akondro ianao. Betsaka ny mahita ny tsy mety. Manelingelina.
Na izany aza, raha handany izany karazana vola izany amin'ny jiro miloko ianao dia miady hevitra izahay fa hahazo tombony bebe kokoa ianao ary handrakotra habaka rindrina mitovy amin'izany amin'ny fividianana fampisehoana lehibe kokoa. Miaraka amin'ny seho 65 "-90" dia tena milentika ny sary. Rehefa nanangana ny Ambilight i Philips tamin'ny 2004, dia nahatratra 40 "-50" ny fahitalavitra. Mbola nisy rindrina miboridana ihany - tsy fialan-tsiny akory izany, fa jiro miloko kosa miseho mangina amin'ny fahitalavitra 85 "raha tsy misy valindrihana 14 tongotra.
Miova loko ve ny jironao? Fotsy mafana ve izy ireo? Fotsy mangatsiatsiaka ve izy ireo?
Tsia. Samy manana ny heviny ny amin'izay tsara indrindra. Manana siansa sy fenitra isika. Ny jironay dia voamarin'ny Fondation Science Science. Ny hazavana Media rehetra. Manomboka amin'ny $ 32.95 Mk2 Eclipse ka hatrany amin'ireo faratamponay lafo indrindra dia voamarina ny ISF.
Raha mijery ireo seha-pifanakalozan-kevitra ianao dia afaka mamaky momba ny jiro miloko fotsy sy fotsy mafana ary avana mandra-pahazavan'ny masonao. Raha misy amin'izy ireo nanao izay tokony hataony, dia tsy ho afaka nanamboatra akany manokana izahay mba hampandeha kokoa ny jiro (zava-misy: ny vidin'ny famokarana ataontsika dia avo kokoa noho izy ireo antsinjarany ny vidiny sy ny tombom-barotra azontsika dia ambany kokoa).
Raha mpandoko loko matihanina ianao, dia nataonay ho anao ny The MediaLight. Raha miahiahy momba ny teatra an-trano ianao ary mahafantatra ny lanjan'ilay fampisehoana voarindra, dia nataonay ho anao ny The MediaLight.
Izahay dia manamboatra hazavana CRI (98-99 Ra) CIE Standard Illuminant D65 (6500K; x = 0.3127, y = 0.329) avo lenta tsara indrindra ho an'ny tsenan'ny matihanina sy ho an'ny mpanjifa ary amidy izany amin'ny vidiny tena antonony ary misy fiantohana 5 taona.
Ny jiro fitongilanana momba ny fitongilanana dia ny fanaovana ny sary ho araka ny nokendren'ny tale. Mety tsy dia dogmatika loatra isika noho ny sasany - raha tianao ny jiro miloko manelatselatra amin'ny rindrinao dia tsy hanandrana hiteny anao hiala amin'izy ireo izahay. Rehefa dinihina tokoa, tsy misy kaonty momba ny tsiro.
Na izany aza, ny fametrahana loko ao ambadiky ny fampiratiana dia manova ny fahitantsika ny zavatra aseho. Izany fotsiny no fiasan'ny masontsika sy ny atidohantsika. Ny loko mafana kokoa toy ny volomboasary na mena ao ambadiky ny fampisehoana dia hahatonga ny zava-drehetra eo amin'ny efijery ho miloko kokoa. Ny mari-pana miloko mangatsiaka toy ny manga, dia hahatonga ny zava-drehetra ho mena kokoa. Mety tsy hampidi-doza izany rehefa mijery The bachelorette, saingy tsy te hanao izany amin'ny efitrano fandokoanao ianao na eo am-pijerena Breaking Bad.
D65 marina ve ny jiro MediaLight Bias Lights?
Ny rafitry ny hazavana MediaLight Bias Lighting dia manome tena fanahafana D65 marina. Rehefa mamaky fiteny marketing ianao izay mampanantena "tonga lafatra" na "absolue" D65, dia fantaro fa tsy azo atao izany amin'ny teknolojia LED ankehitriny.
Tsy misy loharanom-pahazavana D65 tena izy, fa simulator ihany. Ny kalitaon'ny simulator dia azo tombana amin'ny CIE Metamerism Index. Ny spektrum feno, LED CRI ColorGrade ™ avo lenta ao amin'ny hazavana MediaLight Bias Lights dia maneho ny tsara indrindra amin'ny zavatra misy ankehitriny.
Somary mitandrina isika amin'ireo orinasa miantso ny vokariny ho "tonga lafatra" na "D65 marina" hitaky vola bebe kokoa ary aleon'izy ireo tsy mirotsaka amin'ity fanao ity. Ny vokatray dia mifanaraka amin'ny fenitry ny indostria. Faly izahay momba ny fomba tsara niangonantsika sy nanaovan'ny Imaging Science Foundation. Nahazo mari-pankasitrahana ISF izahay ary ny jironay dia voasedra amin'ny fahamendrehana sy ny fitovizan'ny loko. Tianay ny tsy manome toky sy hanadino.
Maninona ny metatra Lumu ahy no manome fandrefesana izay tapaka 300-5000K (na ho aiza na ho aiza?)
araka ny LUMU pejy mpanohana mpanamboatra, ny fandrefesana CCT ambany amin'ny fitaovana Lumu dia mety ho tapaka hatramin'ny 300K ary ny fandrefesana CCT avo kokoa dia mety ho hatramin'ny 3000K. Ny jironay dia eo afovoan'ny tendrony roa amin'ny 6500K ary ny fikafika famaritana azy dia betsaka henjana kokoa noho ny fandeferan'ny fitaovana Lumu.
Raha tsorina dia miala tsiny izahay raha mahazo valiny tsy marina amin'ny Lumu ianao. Ny jironay dia averina dinihina mandritra ny fizotry ny famokarana ary voamarina tsy miankina ao amin'ny laboratoara an'ny Imaging Science Foundation. Tsy manova ny jironay izahay mba tsy hitovizany refy amin'ny maodely iray metatra manokana ary misy ny antony mety hisy fiatraikany amin'ny fandrefesana alaina ivelan'ny tontolon'ny laboratoara.
Ny sasany nanontany hoe: "Fa maninona izy ireo no manao metatra tsy hain'ny refy marina?" Ny valinteninay dia ny fahamendrehana, amin'ny sehatra sasany, mifandraika ary ny halavan'ny halavany dia latsaka ao anatin'ny elanelan'ny maripana miloko sy ny fizarana herinaratra spectral, izay azo refesina amin'ny alàlan'ny fitaovana sasany.
Amin'ny sary, ny fahasamihafana misy eo amin'ny 2300K sy 2400K dia tsikaritra kokoa amin'ny mason'olombelona noho ny fahasamihafana misy eo amin'ny 6500K sy 7000K ary ny fampiasana jiro miorina amin'ny tungsten na mitovy amin'ny sarimihetsika dia matetika ao amin'ny elanelana 3200-5000K. Izany dia isaky ny tranokala Lumu, izay ahitam-bokatra marina indrindra ny valiny amin'ny fitaovana toa an'i Lumu.
Ny metatra ampiasaina amin'ny famokarana sy ny fizahan-toetra, na izany aza, dia afaka mandrefy marimarina kokoa amin'ny faritra CCT avo kokoa noho ny dongle iPhone $ 200. Na dia manome anao valiny iray aza ny jiro iray izay manakaiky ny 6500K amin'ny iray amin'ireto fitaovana ireto dia miankina amin'ny eritreritra ny fitaovana momba ny fizarana herinaratra spectral an'ny jiro izay mihoatra ny refy fandrefesana sy ny fahaizany.
Firy ny lumena avoakan'ny jiro fitongilanana? Moa ve izy ireo mazava tsara hampisehoana ny HDR?
Ny fahazavana 5v 1a dia tsy afaka mihoatra ny famirapiratan'ny teôria indrindra eo amin'ny 400 lumens. Izy io dia mamiratra lavitra noho ny tokony ho izy, ary mbola mila manamaivana ny jiro ianao mba hahatratrarana ny haavon'ny referansa. Ny ravina 5v lehibe kokoa dia manaparitaka ny jiro amin'ny faritra lehibe kokoa - tsy marevaka izy ireo, ankoatra ny maningana vitsivitsy. Ohatra, ny tsipika 6 mirefy hazavana dia hazava kokoa noho ny tsipika 4 santimetatra.
Raha mila jiro mirehitra ianao, ny jirony 800 lumen MediaLight na tariby fahazavana 12v sy 24v dia manome famirapiratana bebe kokoa. Na izany aza, ny tadiny 12v dia tsy amidy saika ny jiro mandeha amin'ny herin'ny USB satria tsy ilaina ny famirapiratana fanampiny, ary aleon'ny ankamaroan'ny olona ny herinaratra amin'ny fahitalavitra.
ny Tabilao tokana MediaLight mamoaka farafaharatsiny teôria teorika 400 lumens (42 LED isaky ny 20lm eo ho eo). Mifanaraka amin'izay havoakan'ny jiro mirehitra malaza ity. 5050 (5x5mm) LED ihany no ampiasaintsika fa tsy ny karazany 3528 (3.5x28mm) kely sy malemy kokoa. Tsy tariby LED entam-barotra ireo. Izy ireo dia natsangana tamin'ny LED izay loharanom-pahalalana azontsika. Misy ihany anefa ny fetran'ny famirapiratana rehefa miala amin'ny herin'ny USB. Na izany aza, satria ny ankamaroan'ny jiro bias dia mihazakazaka miaraka amin'ny dimmer, dia mety tsy ho tratranao ireo fetra ireo amin'ny fampiasana mahazatra.
ny MediaLight Quad output eo ho eo 400 lumens amin'ny famirapiratana farany ambony. Misy ihany anefa ny fetran'ny famirapiratana rehefa miala amin'ny herin'ny USB. Na izany aza, satria ny ankamaroan'ny jiro bias dia mihazakazaka miaraka amin'ny dimmer, dia mety tsy ho tratranao ireo fetra ireo amin'ny fampiasana mahazatra.
Mikasika HDR, eny mazava tsara izy ireo. Ny horonan-tsary HDR dia mampiasa faritra mamirapiratra hanampiana ny video ho toy ny zava-misy. Ny MediaLight dia mihoatra ny takiana famoahana ho an'ny hazavana mihazakazaka fampisehoana HDR.
Mahery vaika amin'ny fahitalavitra monster-85 "ny MediaLight?
Ie. Marina izany. Ianao angamba mila manamaizina azy amin'ny dimmer lavitra tafiditra. Raha eo amin'ny rindrina ny fahitalavitrao dia mety maniry ilay Mk5 Flex 6m na 2m ianao.
Tsy avelan'ny vadiko hosodoko fotsy ny rindrina na volondavenona tsy miandany, inona no azonao atolotra?
Ity dia miasa tsara. :)
Amin'ny maha-zava-dehibe azy rehetra, misy vahaolana hafa, toy ny fametrahana backdrop tsy mitongilana (rindrina mifikitra na lamba) ao ambadiky ny TV.
Azo tapahina ve ny tadiny?
Eny, azonao atao ny manapaka eo anelanelan'ny fifandraisana varahina na aiza na aiza ao amin'ny tsipika MediaLight.
Mamoaka hazavana manga ve ny hazavana mitanila The MediaLight?
Tsia. 6500K ny jironay bias ary 98 CRI ho an'ny maodelin'ny MediaLight mahazatra ary 99 Ra ho an'ny tsipika MediaLight Pro. Indraindray isika dia mieritreritra fa ny mpamokatra hazavana LED bias dia maminavina fotsiny amin'ny 6500K satria ny refy nandritra ny fitsapana anay dia ratsy tokoa tamin'ny ankapobeny. Izahay dia manamarina ny singa rehetra ampiasainay amin'ny alàlan'ny fitaovana mavitrika ary avy eo dia miantoka ny tsy hanakorontananay azy ireo eo am-panangonana ny tadin'ny hazavana. Tsy tarehin-jiro aquarium namboarina ho jiro bias.
Ny antony iray ampiasantsika ny fehiloha mainty fa tsy ny fotsy, izay hahomby kokoa, dia ny latsa-bato fotsy mety hanelingelina bebe kokoa ny mari-pana amin'ny lokon'ny loko PCB mainty, indrindra rehefa antitra izy ireo. (Jereo ireo famaranana elektronika fotsy izay mipetraka mandritra ny fotoana lava).
Manaiky ny manam-pahaizana fa maivana ny fitongilanana tokony ho lokon'ny hazavan'ny masoandro amin'ny andro manjombona, na zavatra antsoina hoe CIE D65 manazava mazava. Nampiasainay ny Photo Research SpectraScan PR-650 sy Sekonic C7000 izay namboarina mba handrefesana ny diode emitting diode. Ireo mpiray antoka aminay avy eo dia manandrana azy ireo amin'ny PR-670 hanamarinana ny zavatra hitanay.
Raha nisy ny vahaolana tsara kokoa dia tsy ho tonga amin'ny The MediaLight izahay. Raha tsorina dia tsy misy na iray aza ireo kitapom-pahazavana LED hafa eny an-tsena na dia efa manakaiky ny 6500K aza, na eo aza ny zavatra lazain'izy ireo amin'ny vilany. Ny hazavana Antec izay notsapainay dia mihoatra ny 9500K, izay mazava ho azy ny lanitra manga. Marika malaza iray hafa koa no nahagaga 20,000 6500K! Ny antsika XNUMXK, ary izany no tianay holazaina. Apetraho mifanila amin'izy ireo dia jereo ny tenanao. Aleo ihany, ampamirapirato amin'ny karatra volondavenona tsy miandany izy ary makà fandrefesana amin'ny alàlan'ny famotopotorana voamarina. Ho faly ianao.
Ny jironay dia tsy ampy ho an'ny fampiasana an-trano fotsiny, fa ampiasain'ny matihanina mandoko ny vidéo ankafizinay amin'ny rafitry ny teatra an-trano. Raha ny marina, raha matihanina manana kaonty ianao Flanders Scientific, tena mamporisika anao hividy amin'izy ireo ny The MediaLight.
Inona ny fanondroana loko (CRI) an'ny LEDs anao?
Hatramin'ny taona 2020, ny LED rehetra misy antsika dia manana CRI farafaharatsiny 98 Ra. Ny MediaLight Pro malaza eto amintsika dia manana CRI 99 Ra - indostria aloha.
Moa ve mifanaraka ny Bias Lights D65 anao?
Ny jiron'ny fitongilananay dia tena marimarina kokoa - marina kokoa noho ny vahaolana jiro mirehitra fluorescent - miaraka amin'ny CRI avo sy maripana miloko 6500K.
Na izany aza, tsy mino izahay fa ny jiro bias rehetra eny an-tsena, ao anatin'izany ny antsika, dia tokony hamidy ho D65. Ny jiro mahazatra CIE D65 dia azo avy amin'ny hazavan'ny masoandro amin'ny lanitra somary manjombona. Raha ny fahitanay, ny hazavana mitongilana artifisialy dia "simulate D65", ary manana fitsinjaram-pahefana hafa tsy mitovy amin'ny masoandro.
Eny, eny. Hatramin'ny alàlan'ny LED iray dia afaka maka tahaka ny hazavana mahazatra an'ny CIE D65, ny MediaLight dia vahaolana tena marina. Mazava ho azy, ho fantatrao avy hatrany ny loharanom-pahazavana fluorescent na LED eo ambanin'ny spectrophotometer. Ny takamoa halogen tungsten halogen (fanesorana infrared be loatra) dia hanakaiky kokoa ny fizarana herinaratra spectral an'ny D65, fa ny endrika endrika, ny famoahana hafanana, ny tsy fahombiazan'ny angovo ary ny androm-piainana fohy dia mametra ny fampiasana tadin'ny tungsten.
Azoko atao ve ny mividy ny MediaLight tsy misy dimmer?
Raha atao teny iray, tsia, fa satria ny jiro fanavakavahana tsara dia mila ahitsy.
Ny antontan-taratasy SMPTE Recommended Practice dia milaza fa ny famirapiratry ny jiro mitongilana izay hita taratra eny ambonin'ny ambadiky ny fahitalavitra dia tokony latsaky ny 10% amin'ny haavon'ny fotsy avo indrindra amin'ny fitaovana hijerena. Raha tsy misy dimmer, dia manjelanjelatra ny tadin'ny LED. Izany dia mety hiteraka mainty torotoro, vokan'ny halo tafahoatra ary manilika ny sasany amin'ireo tombony azo amin'ny fampiasana jiro fitongilanana aloha.
Ankoatr'izay, misy toe-javatra mety hanananao rindrina fotsy ao ambadiky ny televiziona fa tsy ilay volondavenona tsy tokony horesahina. Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny famirapiratan'ny jiro dia azonao antoka fa tsy mihoatra ny famirapiratan'ny fahazavana voalaza etsy ambony izy ireo.
Ny rafitra hafa, toy ny rafitra jiro mirehitra fluorescent dia tsy mety simba, fa ampiasaina miaraka amin'ny baffles sy / na sivana tsy mitongilana mba hahatratrarana ny haavon'ny hazavana.
Fohy fohy ny tariby mankany amin'ny toerana lavitra ...
Ny fanaraha-maso lavitra dia tsy misy tariby. :-) Ny zavatra hitanao dia ny tariby mankany amin'ny maody maody. Tsy maninona ny halavany satria 15 metatra miala ny elanelana lavitra. Misy firaka tariby fanampiny 6 metatra fanampiny izay mifandray amin'ny jiro. Raha vantany vao ampifandraisinao ilay maody maoderina dia tsy mila mikasika azy intsony ianao.
Mivarotra ny vokatrao amin'ny Amazon.com ve ianao?
Izahay dia nivarotra ny vokatra tany am-boalohany MediaLight tany Amazon. Izany hoe, nanao izahay mandra-pahafatin'ny valanaretina COVID-19. Avy eo, ny baiko rehetra izay tsy noheverina ho tena ilaina dia nahemotra mafy. Ny fahatarana 30-40 andro no mahazatra.
Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny olona rehetra tafapetraka ao an-trano, nitombo ny fangatahana fahitalavitra sy kojakoja vaovao, saingy ny kaomandinay Amazon dia nafatotra tsy nisy farany. Hitanay fa tsy afaka mahita orinasa hafa intsony izahay. Napetrakay tao anaty harona ohabolana iray ny atody ohabolana rehetra.
Nanapa-kevitra ny hanaisotra ny vokatra avy any Amazon izahay ary hivarotra azy ireo mivantana. Nikatona ny biraonay, nandefa avy tao amin'ny garazy izahay ary nikarakara ny fakana an-telefaona isan'andro tsy alain'ny USPS, UPS ary DHL.
Nandritra izany dia fantatray fa tsy izany ny ankamaroan'ny olona mahita ny vokatra eto Amazon. Nandeha tany izy ireo satria, amin'ny tranga maro, mora kokoa izany. Na izany aza, tsy mety izany rehefa tsy mahazo ny mombamomba anao tanteraka momba ny vokatra ianao ary miafara amin'ny fividianana habe na endrika diso amin'ny fametrahana anao. Tsy nety ho an'ny olona tsy nahalala hoe ny jirony 4 taona dia mbola sarona ao anatin'ny 5 taona, na ho an'ireo olona nieritreritra fa niova loko ny jirontsika satria nandamina ny vokatra isaky ny vidiny izy ireo ary nihevitra fa ny vidinay dia midika fa ny vokatra niova loko.
Rehefa namoaka ny andiany Mk2 vaovao izahay tamin'ny volana Jolay, nanapa-kevitra izahay fa amin'ny tranokalanay sy amin'ny alàlan'ireo mpivarotra nahazo alalana iraisam-pirenena ihany no hatolotray. Tsy dia miady saina loatra ary mahafantatra ny mpanjifantsika izahay betsaka tsara kokoa. Manana chat Internet, antso an-telefaona ary antso video be dia be izahay (hojerentsika ny fanamboarana anao alohan'ny hametrahana raha mila tanana ianao) izay mampianatra anay bebe kokoa momba ny fampiasan'ny mpanjifa ny vokatray. Manome torohevitra sy serivisy tsara kokoa koa izahay.
Ary ahoana ny orinasanao? Inona no fahaiza-manao entinao amin'ny toerana maivana?
BiasLighting.com dia fizarana an'ny Scenic Labs. Niorina tamin'ny 2009, izahay dia mpanonta ny Spear & Munsil Benchmark. Talohan'izay, ny mpanorina anay dia niasa tamina indostria sy indostrian'ny fanamafisana horonantsary mitovy mandritra ny folo taona, namoaka Digital Video Essentials. Azonao atao ny milaza fa miaina sy miaina fari-pitsipika momba ny teatra an-trano isika amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Noho ny fahaizanay manokana dia mahazo ny fahalalàn'ny sehatra ananan'ireo mpahay siansa momba ny sary malaza sasany izahay, ary koa ireo fitaovana laboratoara tena milay.
Ny habaka hazavana mitongilana dia raharaha matory nandritry ny folo taona lasa. Ankoatry ny teboka mamirapiratra vitsivitsy, toy ny iray amin'ireo ankafizinay - ny jiro Ideal Lume (fluorescent) efa najanona ankehitriny, ny ankamaroan'ny vokatra eny an-tsena dia lafo loatra, fako mora vidy, na fako lafo loatra. Tianay ny maha-marina ny rafitra fluorescent fa tianay ny manambatra ny maha-marina ny fahamoran'ny LED's.
Inona no nitranga tamin'ny fanovana zana-kazo MediaLight?
Tena mahira-tsaina ianao! Nandefa ny subreddit MediaLight izahay taorian'ny fanafoanana ny NAB 2020. Nihevitra izahay fa afaka manandrana fomba vaovao hahitan'ny olona fanontaniana.
Indray andro, ao anatin'ny iray minitra taorian'ny fankatoavana ny fanolorana nee ao amin'ny subreddit, ny kaontiko "naato" maharitra noho ny fanitsakitsahana votoaty tsy voalaza anarana. Niantso aho ary namaly ny admin Reddit fa diso ny fampiatoana ary naverin'izy ireo ny kaontiko.
Na izany aza, nandritra ny andro vitsivitsy fampiatoana dia nanontany tena aho raha ny fampiantranoana ny fanavaozana anay manokana no nahatonga ny fampiatoana na dia nitandrina aza izahay mba hisorohana ny rohy mankany amin'ny vokatra na plug-ntsika.
Tamin'ny farany dia tsy nisy ifandraisany amin'ilay fampiatoana diso izany ny fanavaozana nataontsika.
Fa fantatrao ve? Hitanay fa tsy tokony hanao subreddit ho an'ny vokatray manokana izahay. Izany dia tokony avela ho an'ny mpankafy. Masoivoho tsaratsara kokoa noho ny taloha ny mpanjifa tena izy. Raha te handray an-tanana ianao dia alefaso tsipika izahay dia hatolotray ny lakileny.
Izany no antony tsy anananay subreddit intsony, na dia mbola faly aza aho mizara vazivazy dadan'ilay zotram r / dadjokes.
Ny jiro bias mitovy vidiana mitovy amin'izany dia nilaza fa 6500K, fa ny LED kosa tsy marina mihitsy! Green sy manga no endrik'izy ireo! Ahoana no ahalalako fa tsy mitovy ny jiro bias anao?
Ny LED fotsy rehetra dia entin'ny diode manga misy fotony (Azafady, mariho, eto amin'ny taona 2020, ny MediaLight Pro dia tarihan'ny diode violet akaikin'ny violet ary tsy misy spike manga). Ny diode dia mitarika fotona amin'ny fifangaroan'ny pososôra sy ireo posipôra ireo, avy eo, mamirapiratra fotsy. Rehefa mety ny mifangaro phosforors avo lenta dia azonao ny mari-pana miloko ilainao miorina amin'ny fahitan'ny mason'olombelona loko.
Azonao atao ny mijery akaiky kokoa ireo toetran'ny hazavana amin'ny alàlan'ny fandalinana azy eo ambanin'ny spectroradiometer. Marika famantarana jiro fotsy LED ny tsipika manga etsy ambony (ny jiro rehetra dia samy manana ny mampiavaka azy - tungsten, fluorescent, tara-masoandro, neon, sns). Na dia toa miteraka hazavana manjelanjelatra aza ity, ity dia ilay spectrografikan'ny iray aminay tena marina LED's. Ny loko hafa dia misy amin'ny fandanjalanjana mety mba hahatonga ny mari-pana loko 6500K sy CRI an'ny ≥ 98 Ra. Mazava ho azy, ny fandrefesana dia nalaina tao amin'ny laboratoara voafehy ary nesorina tamin'ny karatra volondavenona tsy miandany satria ilaina amin'ny famakiana marina sy maharitra.
Fitsinjaram-pahefana elektrika an'ny andian-dahatsoratra MediaLight Mk2
Mila manana fenitra ianao.
Ny ankamaroan'ny zavatra ataontsika dia tsy dia mafy na mahaliana, fa metodolojika fotsiny momba izany izahay, ary izany dia manampy antsika hampivelatra vokatra marina. Rehefa nandefa anay singa subpar ireo mpamatsy mety ho avy, dia tsy nanao izany izy ireo. rehefa ara-bakiteny LED an-jatony, nahita mpamatsy afaka manamboatra izay ilainay izahay. Namolavola fomba fanao tsara indrindra izahay mba hisorohana ny fandotoana ary hiantohana fa ny LED premium izay novidianay dia mijanona ho marina amin'ny mari-pana ny lokony na dia efa tafapetraka sy tafavory aza izy ireo.